कम्युनिस्ट शासनमा बढ्यो अर्काे शुल्क, अब ४०–४४ लाख तिनुपर्ने – Khabar Silo
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शासनकालमा एकपछि अर्काे महंगी र मनपरी बढिरहेका बेला एउटा अर्काे शुल्क बृद्धि भएको छ ।सरकार मातहतको चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस (डाक्टर) अध्ययनको शूल्क बढाएर विद्यार्थीको ढाड सेक्ने भएको छ ।
बढेको मूल्यपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क कायम भएको जनाइएको छ ।
यसअघि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५ मा मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बीडीएस अध्ययन शूल्क २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि उक्त शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको थियो । शुल्कको पहिलो एकतिहाई रकम पहिलो वर्ष र बाँकी वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिइने जनाइएको छ ।
आयोगले एमबीबीएस अध्ययन शुल्कको एकतिहाई उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार ८५ र बाहिर १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर देशभरका १ हजार विद्यालयमा सामुदायिक सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आईटी ल्याब) स्थापना गर्दैछ । तर, आईटी ल्याब स्थापना गरिने विद्यालयको छनोटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ को शैली अपनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट रकम खर्चिने गरी ७७ […]
१४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अन्तर जिल्ला तथा लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान भदौ मसान्तसम्म नखोल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले भदौ १५ सम्मका लागि गरेको स्थगनलाई भदौ मसान्तसम्म लम्ब्याएको एक मन्त्रीले बताए । यसअघि अन्तरजिल्ला यातायात तथा हवाई उडान भदौ १ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, […]
काठमाडौं : आइतबार नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चियापान समारोह गरेको छ। चियापानमा नेकपा शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका छन्। चियापानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले सम्बोधन गरे। ४५ वर्षदेखि देउवासँग मित्रता चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४५ वर्षदेखि […]
०७६ कार्तिक ०२ गते शनिबार ई. स. २०१९ अक्टोबर १९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य